दलितले बाजा बजाएर बाहुनी भित्र्याए, दलितका पक्षमा प्रशासन ! — JagaranMedia.Com
दलितले बाजा बजाएर बाहुनी भित्र्याए, दलितका पक्षमा प्रशासन !
जागरण मिडिया प्रकाशित : २०७४/९/२० गते
एउटा हातमा लौरोको साहरा, अर्को हातमा श्रीमतिको । गुल्मी अर्वेनीका लालबहादुर सुनारको कस्तो शौभाग्य ! ८१ वर्षको उमेरमा विवाह हुँदा छोरा र नाती जन्ती , सिडियो प्रमुख अतिथी ।
यसरी गाउँमा लुकेको र दवेको घटना खोजपत्राकारिता मार्फत रातोपाटीले उठान गरेको प्रति प्रमुख जिल्ला अधिकारीले धन्यबाद समेत दिए । उनले पुनस्थापना पनि न्यायको एक हिस्सा भएकोले यसलाई हाम्रो समाजको मेलमिलाप र सहिष्णताका रुपमा लिनु पर्ने धारणा राखे । नकरात्मक सन्देशपछि नै सकरात्मक सन्देश आउने बताउँदै उनले अर्वेनीले हिजो नराम्रो सन्देश दिए पनि आज उनैहरुले स–सम्मान पुनस्थापना गरेर देशैभर सकरात्मक सन्देश दिएकोमा धन्यवाद दिए ।
एकताबद्ध अधिकारकर्मी :
(जागरण मिडियाको ब्लगमा २०७३ माघ १७, प्रकाशित )